Araka izany dia mirona any amin’ny fanarahan-dalàna ny olona ny amin’ny fampiasana ny parking noho ny ezaka fampahafantarana sy fampianarana natao. Nanamafy izany ny fiaraha-miasa tamin’ny polisy nasionaly sy monisipaly izay niezaka nanalalaka ny fifamoivozana sy nampihatra ny lalàna tamin’ireo fiara tratra eny amin’ny toerana tsy tokony hiantsonana. Nanamarika ihany koa ny teo anivon’ny Easy Park fa na dia teo aza ny firosoana any amin’ny fanarahan-dalàna dia hohamafisina amin’ity taona ity hatrany ny fampahafantarana ny fitsipika mifehy ny fiantsonana. Hatreto aloha dia notazonina 250 Ariary isaky ny antsasak’adiny ihany ny saran’ny fiantsonana ary mbola mipetraka hatrany ireo karazana sazy ao amin’ny didim-pitondrana laharana 048 momba ny fampiasana ny parking. Nanao antso avo amin’ny fanjakana ihany koa ny Easy Park ny amin’ny tokony hanitarana tanteraka ny fiantsonan’ny fiarakodia hisorohana ny fitohanana satria sarotra hatrany ny fandaminana izany indrindra rehefa fotoanan’ny tsena sy ny andro fety.